BORIC ACID IYO BORIC ALKALKA: ISKU MID AMA AAN AHAYN, WAA MAXAY FARQIGA U DHEXEEYA MUKHAADARAADKA, WAA MAXAY DHIBICDA DHEGTA, IYO MAXSUULKA KALE EE FARQIGA U DHEXEEYA IYAGA? - WIXII MARTIDA
Dadka intooda badan way ku adagtahay in ay kala soocaan saddexda walax oo leh magacyo la mid ah - boric acid, alkol boric, iyo salicylic acid.
Daawada, daroogada sida alkol boric waa loo isticmaalaa, waa xal loo yaqaan ethanol (70%) boric acid, diiradaas oo laga yaabo in ay kudhacdo inta u dhaxaysa 0.5-5%. Si loo fahmo sifooyinka daroogada, waxaa lagama maarmaan ah in la eego walaxda firfircoon ee la ogaado waxa ay tahay.
Sidaa daraadeed, aan isku dayno inaan ogaanno, iyo sidoo kale tixgeliyo waxa saxda ah ee dhagta.
Waa maxay boric acid?
Boric acid (H₃BO₃) waa walax adag, budada cad, oo aan ur lahayn. Waxay kala dirtaa heerkul ah 0 º. Waxay ku jiraan biyaha macdanta, iyo sidoo kale tiro yar - oo ah nooca berry, miraha, iyo mararka qaarkood khamri.
Isticmaalka boric acid waxay dabooleysaa tiro badan oo ah meelo kala duwan. Maanta, boric acid waa la isticmaalaa:
ee soo saarista alaabada dhaldhalaalka ah;
wuxuu leeyahay hanti-jeermis-dilaha, sidaa darteed waxaa loo adeegsadaa daawada daaweynta nabarrada;
qayb ka mid ah daroogooyinka qaarkood;
ee soo saarista rinjiga macdanta;
ku lug leh soo saarida nukliyarka;
ee warshadaha cuntada;
Daawadani ma aha mid la mid ah asiidh. Waa maxay farqiga - fududahay in la fahmo. Qamriga Boric waa xalka dareeraha ah ee boric acid ee etanol (70% ethanol). Waxay leedahay dhammaan sifooyinka antiseptic ee boric acid, waxaana loo isticmaalaa kareemada, cadaadis iyo jeermiska nabarrada.
Ka mid ah jiilka weyn, habka lagu daaweynayo bararka october wuxuu caadi u yahay suufka suufka lagu qooyey alkalka boric. Qeybta caadiga ah, boric acid iyo khamriga magaca isku mid ah ayaa ah daaweyn isku mid ah oo lagu riixo dhegta ee otis ama loo isticmaalo qaab kale. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ognahay, in waqtigan xaadirka ah, khabiiradu ay ku doodayaan waxtarka iyo badbaadada daaweyntaas.
Waa in la xasuusto Cirboorka Boric, sida daroogo kasta, wuxuu sababi karaa waxyaabo saameyn ah.Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in si deg deg ah loo raadsado caawimaad caafimaad haddii calaamadaha soo socda lagu ogaado:
sambabada, taas oo noqon karta labadaba (calaamaduhu waxay u muuqdaan daqiiqado / saacadood kaddib marka kicinta uu galo jidhka), iyo daba-gaabis (horumarin joogto ah oo la socda cunnida joogtada ah ee kicinta qaybaha yaryar iyo isku uruur);
madax xanuun daran;
oliguria (yareeynta xaddiga kaadida la soo saaray maalin kasta);
marar dhif ah - xaalad shoog ah.
Cabbiriga Boric waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii macnaheedu loola dagaalamo finan. Sida caadiga ah, waxay ku qoyaan dhoobada suufka iyo wejiga sifaha. Si loo xalliyo daaweynta ugu dhakhsaha badan, waxaad ku celin kartaa nidaamkan laba jeer maalintii, laakiin xaaladdan waxaad u baahan tahay inaad ka taxadirto inaadan harraxin maqaarka.
Saliidaynta maqaarka xalkeeda waa lagama maarmaan ilaa dhammaystirka dhammaadka finanku, halka lambarkoodu hoos u dhacayo wiig ka dib marka la codsado xalka. Haddii ay dhacdo diiqad, waa degdeg in la joojiyo nidaamka.
Maxay ka duwan tahay kan kor ku xusan ee salicylic acid?
Salicylic acid (C7H6O3 ) waa walax ka mid ah kooxaha acidic hydroxy acids. Marka ugu horeysa walaxkan waxaa laga helay jilif bannaan. Dabadeed, kiimistaan ​​Jarmalka Kolbe wuxuu awooday inuu soo saaro salicylic acid iyadoo la adeegsanayo qaab fudud, oo loo isticmaalo inuu soo saaro maanta.
Salicylic acid waxaa markii hore loo isticmaalaa daawaynta laabotooyinka. Waqtigan xaadirka ah, marka ay jiraan tiro badan oo waxtar leh oo lagula dagaallamo cudurkan, walaxdaas waxaa loo isticmaalaa sidii anti-bararka.
Salicylic acid waxaa laga helaa waxyaalo badan oo isku dhafan.sida:
kareemka iyo kareemka "Klerasil";
qalimaan iyo qaabab kale.
Marka xooga la saaro Salicylic acid wuxuu saameeyaa xasaasiyadaha xasaasiga ah waxaana loo isticmaalaa in lagu yareeyo xanuunka.
Sida dawooyinka kale ee nonsteroidal anti-inflammatory, salicylic acid waxaa kale oo loo isticmaalaa walxo-qabasho iyo sida antibiotiga.
Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo salicylic acid astaamaha soo socda:
cudurrada faafa iyo bararka maqaarka;
adkaynta xad-dhaafka ah ee corneum stratum corneum ee epidermis;
seborrhea, timo lumis;
pyoderma (lafdhabarka maqaarka);
erythrasma (qaabka caadiga ah ee pseudomycosis ee maqaarka);
ichthyosis (ku xadgudubka keratinization ee maqaarka - cudur la iska dhaxlo);
in laga takhaluso hadhuudhka, dhibco madow, weelasha;
Waa in la xusuusnaado in marka ay dhacdo in la cuno, salicylic acid, oo ah nooca acids guud ahaan, cuncun caloosha.
Dadka qaba cudurada habka dheef-shiid kiimikaadku waa inay la tashadaan takhtar takhasus leh ka hor intaanay qaadan alaab ay ku jiraan salicylic acidkuwaas oo ay ku jiraan daawooyinka caanka ah sida:
aspirin (badanaa loo isticmaalo sida febrifuge);
Phenacetin (oo lagu daro daawooyinka kale ee daawada qandhada);
antipyrine (loo isticmaalo si wadajir ah).
analgin (waxaa loo isticmaali karaa kaniiniyada iyo barar-dhicis: subcutanously, intramuscularly, intravenous);
Butadion (loo isticmaalo kiniinnada);
Salicylate Sodium waxaa lagu talinayaa daawaynta laabotooyinka ee qaabka budada, kiniiniyada ama xalka, waxaana sidoo kale lagu maamulaa 10-15% xalal gudahood.
Marka lagu daaweynayo laabotooyinka, salicylates waxaa lagu qoraa qiyaaso badan, sidaa darteed waxay sababi karaan saameynaha:
finan maqaarka ah.
Digniin! Waa in la xusuustaa in inta lagu guda jiro uurka iyo salicylic acid feed aan lagula talin.
Markaad ogaato maaddooyinka oo dhan, aynu soo koobno ​​haddii ay isku mid tahay ama aan ahayn, waa maxay farqiga:
Cabbiriga Boric waa nooc ka mid ah boric acid isla markaana uu leeyahay hanti dawo isku mid ah - labadaba waa jeermis dilaha;
Salicylic acid waxay ka duwantahay labadii waxyaabood ee la sheegay ee ku jira dhismahiisa iyo sidoo kale goobta codsiga - waa walxo kaadi-barar iyo walxo xanuunka;
markaad isticmaasho dhammaan daroogooyinka la tixgeliyey, waa inaad taxadar iyo la tasho khubaro kahor inta aadan isticmaalin.